द्रुत गाइड: कसरी यात्रा Cinque Terre द्वारा ट्रेन | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > द्रुत गाइड: कसरी यात्रा Cinque Terre द्वारा ट्रेन
इटाली लोकप्रिय मध्ये एक छ गन्तव्यहरू पर्यटक संसारमा. मान्छे शानदार खाना लागि देश बगालको, संस्कृति, र धनी इतिहास. वास्तबमा, तपाईं पनि इटाली को आकर्षण अनुभव गर्न ठूलो शहर भ्रमण छैन. यस को मोहक खण्डका छ राम्रो उदाहरण हो इटालियन रिभिएरा रूपमा ज्ञात Cinque Terre. यो एक लोकप्रिय गन्तव्य मान्छे भनेर चाहेको भूमध्य तट विच्छेद आधुनिक जीवनको तनावपूर्ण गति देखि आनंद लागि. जबकि त्यहाँ इटाली को तटों मा छुट्टयाएर सहर र गाउँमा धेरै छन्, Cinque Terre को सहर द्वारा टाढा सबैभन्दा लोकप्रिय छन्. कारण यो मा ब्याज गर्न शानदार गन्तव्य, एक ट्रेन सेव ट्रेन द्वारा सिन्के टेरे कसरी हेर्ने भन्ने बारे द्रुत गाइड सँगै राखेको छ.
किन जाओ रेल?
एक रेल सबै भन्दा राम्रो विकल्प हो किन भ्रमण गर्न Cinque Terre छ कि धेरै पर्यटकहरु सोच्नुहोला. एक कार भाडामा लिने र ड्राइभिङ यो शान्तिपूर्ण क्षेत्र राम्रो सुनिन्छ गर्न, दायाँ? गलत. बुझ्न छैन कि किन सम्भव छ, यो के अप Cinque Terre बनाउँछ थाहा आवश्यक छ. Cinque Terre मुख्यतया पाँच माछा मार्ने गाउँको माथि गरेको छ, यसैले नाम (पाँच मुलुकमा). यी गाउँमा छन् Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore, र Monterosso अल Mare. तिनीहरूले वरिपरि सानो समुदाय संग मूल पाँच महल थिए. बाच्नु, यी गाउँमा माछा पकडने र खेती भाग लिए. यस गाउँमा थिए, अहिले सम्म, जडित पैदल यात्रा पथ र मात्र सुलभ थिए रेल द्वारा वा समुद्र.
तिनीहरूले वर्ष पहिले थिए यी गाउँमा अलग्गै अब हो. तथापि, तिनीहरू अझै पनि धेरै आनन्द कि रिमोट भावना कायम. सडक अब गाउँमा केही गर्न प्रमुख छन्, तर तिनीहरू धेरै संकीर्ण छन् र सडक नयाँ निम्ति एक खतरनाक यात्रा हुन सक्छ. तपाईं कार द्वारा गाउँमा पुग्न भने, तपाईं कार द्वारा तिनीहरूलाई बीच यात्रा गर्न सक्ने छैनन्. कुनै पनि खतरा र असुविधाको जोगिन, यो परिवहन रेल सबैभन्दा सुविधाजनक सिस्टम संग गाउँ भ्रमण गर्न सबै भन्दा राम्रो छ.
तपाईं के अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ Cinque Terre ट्रेन लाइन बाट?
को Cinque Terre रेल लाइन छ रोक्दछ छ. यी रोक्दछ क्रम लास्पेजीया छ (क्षेत्र मा केन्द्रीय यातायात हब), Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza, Monterosso, त्यसपछि बल्ल Levanto. यी भ्रमणहरू अपेक्षाकृत छोटो छन् र धेरै समय लाग्न छैन. लास्पेजीया देखि Riomaggiore गर्न यात्रा लिन्छ 10 मिनेट. को Cinque Terre सहर बीच यात्राको बारेमा हो5मिनेट प्रत्येक. यी रेलका गाढा सुरुङको मार्फत जाने कि 1870s गर्न मिति फिर्ता. यो अचानक अँध्यारो मार्फत गएर र त्यसपछि चमक देखेर एक रोमाञ्चक अनुभव छ र आश्चर्यजनक दृश्य भूमध्यसागरको.
एक गन्तव्यहरू बीच छोटो दूरी दिइएको अपेक्षा थियो रूपमा यी रेलका छैन बारम्बार रूपमा छन्. तिनीहरूले सामान्यतया हरेक घण्टा एक पटक चलाउन, तर यो समय समयमा भिन्न हुन सक्छन्. तथापि, यो सोध्नु सधैं उत्तम हुन्छ थप यात्रा जानकारी जब आफ्नो टिकट खरिद. यो को अनुसूची र यात्रा समय थाह बाहेक रेल मार्ग, यसलाई आफ्नो टिकट मान्य गर्न महत्वपूर्ण छ. त्यहाँ रेल मञ्चहरूमा तपाईंले प्रयोग गर्न सक्ने मा प्रमाणीकरण मिसिन छन्. तपाईं के गर्न छ सबै साना पहेलो मिसिन को स्लट मा टिकट को साँघुरो अन्त घुमाउन र टिकट सुन्न प्रतीक्षा छ.
1. द्रुत गाइड गर्न Cinque Terre द्वारा ट्रेन: Riomaggiore
Riomaggiore या त पहिलो बिसौनी हुनेछ (यदि तपाईं लास्पेजीया देखि लाग्यौं छन्) वा पाँचौ स्टप (यदि तपाईं Levanto देखि लाग्यौं छन्). तथापि, यो सम्भवत धेरै Cinque Terre आगंतुकों लागि पहिलो स्टप हुन जाँदै छ, यसलाई त्यहाँ प्राप्त गर्न सबैभन्दा छिटो तरिका हो देखि. Riomaggiore पाँचवटा गाउँ को सबै भन्दा ठूलो छ, मुख्य पार्क कार्यालय छ देखि र यो अनौपचारिक राजधानी छ. को भवनहरु ठाडो गहिरो सारा बैठे छन्, साना बन्दरगाहसम्म सबै तरिका. प्यास्टेल घरहरू peeling को दृश्य सुरम्य छ र सधैंभरि आफ्नो स्मृति मा रहन हुनेछ. यो सूर्यास्त मा हेर्न एक शानदार दृष्टि छ, and it isamust-see for couples that want to shareaspecial moment.
लास्पेजीया Riomaggiore गाडिहरु गर्न
फ्लोरेन्स Riomaggiore गाडिहरु गर्न
मोडेना Riomaggiore गाडिहरु गर्न
Riomaggiore गाडिहरु गर्न लिभोर्नो
Manarola पहिलो दृष्टि मा Cinque Terre तट मा तल गिर देखिन्छ कि एक Petit गाउँ हो. क्यासकेडिङशैलीपाना रंगीन भवनहरु को भ्रम एक छ सुन्दर दृष्टि. यो इटालियन संस्कृति र बीहड प्रकृति को एक सही मिश्रण छ. तपाईंले राम्रो दृश्य लिन, तपाईं गाउँमा खोजी गर्न सक्नुहुन्छ. Manarola एक डुङ्गा र्याम्प र एक पौडी प्वाल सुविधा एक सानो बन्दरगाह छ. यो छ सही ठाउँमा एक पौडनु लिन र केही cliff डाइभिङ अभ्यास. बंदरगाह Manarola बासिन्दाहरू हौं भनेर धेरै माछा मार्ने डुङ्गा सँगैको छन्. पक्रने र माछा खाने को परम्परा अझै पनि जीवित छ र गाउँमा उन्नतिशील.
लास्पेजीया Manarola गाडिहरु गर्न
Manarola गाडिहरु गर्न Riomaggiore
Manarola गाडिहरु गर्न Sarzana
Manarola गाडिहरु गर्न Levanto
3. द्रुत गाइड गर्न Cinque Terre द्वारा ट्रेन: Corniglia
प्रत्येक पाँचवटा गाउँमा एक निश्चित आकर्षण छ. यो Waterfront मा छैन देखि Corniglia विशेष छ. तथापि, यो समुद्र तट मा के अभाव, यो भन्दा बढी यसको आफ्नै अद्वितीय सौन्दर्य संग अप बनाउँछ. कोर्निगिलिया भन्दा धेरै टाढाको महसुस गर्दछ अन्य गाउँहरु. तथापि, यो एक थप आराम र स्थानीय वातावरण प्रदान गर्दछ. गाउँमा अक्सर यसको कठिन ट्रेल्स लागि अनदेखी छ. डुङ्गाबाट पुग्न सकिन्छ कि अन्य गाउँमा विपरीत, कर्निगलिया खुल्ला छ पहाडहरूको शीर्ष र कुनै समुद्री पहुँच छैन. यसलाई पुग्न मात्र तरिका गर्न Cinque Terre बाटो वा पदयात्रा छ रेल लिन. तथापि, यो रेल तपाईं कुनै पनि शारीरिक प्रयास छोडूँगा कि टिप्पणी गर्न आवश्यक छ. गाउँको केन्द्रमा पुग्न र सानो गाउँले प्रस्ताव राखेका सबै चीज हेर्न तपाईं अझै पनी सीढीहरू हिड्नुपर्नेछ.
कोर्निग्लियासँग एक छ शानदार दृष्टिकोण यसले तपाईंलाई वरपरका पहाडहरू र विशाल महासागरहरू देख्न दिन्छ. गाउँमा मा Belvedere जाने र Cinque Terre को सौन्दर्य मा लिन ठूलो ठाउँ छ. एक पटक तपाईं स्वाद गाउँमा प्रस्ताव आनन्द उठाउन सक्छौं त्यसो, स्वादिष्ट रक्सी गर्न अचम्मको pesto देखि. Corniglia रक्सी बनाउने एक धनी इतिहास छ, र तपाईं स्थानीय मित्रता गाँस्न भाग्यशाली पर्याप्त छन् भने, तपाईं स्वाद र आफ्नो मदिरा बारेमा सिक्न सक्छ.
लास्पेजीया Corniglia गाडिहरु गर्न
फ्लोरेन्स Corniglia गाडिहरु गर्न
Manarola Corniglia गाडिहरु गर्न
Corniglia गाडिहरु गर्न LEVANT
Vernazza मात्र Cinque Terre छैन मा सबै भन्दा सुन्दर गाउँको रूपमा मानिन्छ, तर इटाली को सम्पूर्ण देश. यो निश्चय पनि यात्रा प्रेम धेरै गिरावट बनाउँछ कि Cinque Terre को crowning jewel छ. यो अन्य गाउँमा कमी एक थप सुरुचिपूर्ण र परम्परागत महसूस छ. जोड्नुहोस् असाधारण खाना र अद्भुत दृश्यहरूका साथ, र तपाईं दोस्रो यात्रा ग्यारेन्टी एक स्थान प्राप्त. बनाउन Vernazza मा जब Doria महल भ्रमण गर्न निश्चित. यसलाई पहिले गाउँमा दशक को मान्छे सुरक्षित अन्तिम मूल टावर को एक समावेश.
Vernazza गाडिहरु गर्न Corniglia
फ्लोरेन्स Vernazza गाडिहरु गर्न
Vernazza गाडिहरु गर्न बोलोग्ना
Vernazza गाडिहरु गर्न Riomaggiore
5. द्रुत गाइड गर्न Cinque Terre द्वारा ट्रेन: Monterosso अल Mare
Monterosso अल Mare पक्कै पनि Cinque Terre सबैभन्दा touristy र रिसोर्ट-जस्तो शहर छ. यो कार छ, होटल, र ढुb्गा समुद्र तटहरू पर्यटकहरूको लागि उत्तम छ. तपाईं इटाली को यो अचम्मको भाग भ्रमण गर्न चाहनुहुन्छ भने, तर बढि आधुनिक अनुभूति रुचि, त्यसपछि Monterosso लागि छ. Monterosso साँझ strolls लागि पूर्ण छ कि एक विचरण छ, र अझ राम्रो, तिनीहरूले जो कोहीले आनन्द समुद्री गर्नेछ ठीक भोजन छ.
रोम Tivoli गाडिहरु गर्न
रोम गाडिहरु गर्न TIVOLI
पेरुगिया Tivoli गाडिहरु गर्न
Orvieto Tivoli गाडिहरु गर्न
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, Cinque Terre एक अद्वितीय इटालियन अनुभव अनुभव गर्न चाहेको प्रस्ताव पर्यटकहरूलाई धेरै छ. यो एक अविस्मरणीय अनुभव प्रतिज्ञा कि पाँच अद्वितीय गाउँमा छ. आफ्नो ट्रेन लागि पुस्तक एक टिकट र आफैलाई एक साहसी अनुभव दिनुहोस् जुन अरू कुनै जस्तो छैन.
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “द्रुत गाइड: कसरी यात्रा Cinque Terre द्वारा ट्रेन” आफ्नो साइट मा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fguide-travel-cinque-terre-train%2F%3Flang%3Dne – (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
cinqueterre europetrains europetravel eurotrip trainjourney Tranride रेल सुझावहरू यात्रा